SCG Smartwood နံရံကပ်အလှဆင်ဘုတ်ပြား - Modeena-M1 စီးရီး 0.98ft x 4.92ft x25mm. - အရောင်မပါ | SCG Building Materials
ProductProduct DetailSCG Smartwood နံရံကပ်အလှဆင်ဘုတ်ပြား - Modeena-M1 စီးရီး 0.98ft x 4.92ft x25mm. - အရောင်မပါ
Smartwood နံရံကပ်အလှဆင်ဘုတ်ပြား (Modeena စီးရီး)သည် တမူထူးခြားသော ဖောင်းကြွဒီဇိုင်းပါရှိ၍ အိမ်တွင်းအိမ်ပြင် အလှဆင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆေးသုတ်ရာတွင် ပထမဦးစွာ Primer ခံဆေးအရင်သုတ်ပြီ အခရေးလစ် ရေဆေးကိုလွယ်ကူစွာသုတ်နိုင်သည်။
အရွယ်အစား 30.000 x 150.00 (cm)
အလေးချိန် 10.800 kg
အနံ 30.000 cm
အလျား 150.00 cm
အခြားသော အချက်အလက်များ 2.22 pcs/sq.m.
SCG Smartwood အမိုးတံစက်မြိတ်ကာလိုင်နာပြား (အနားစောင်းပါစီးရီး) 2.97 in x 9.84 ft x8 mm - အရောင်မပါ
SCG Smartwood မျက်နှာစာပိတ်သစ်သားပြား(ပန်းဆွဲပြား) 5.90 in x 13.12ftx16mm - အောက်ခံဆေးရောင်
SCG Smartwood သစ်ပြားချပ် Timber စီးရီး 5.90 in x 9.84 ft x 8 mm. - အရောင်မပါ
SCG Smartwood သစ်ပြားချပ် Standard စီးရီး 5.90 in x 9.84 ft x 8 mm. - ဆင်စွယ်ရောင်
SCG Smartwood သစ်ပြားချပ် Standard စီးရီး 5.90 in x 9.84 ft x 8 mm. - အနီရောင်မာက
SCG Smartwood သစ်ပြားချပ် Standard စီးရီး 5.90 in x 9.84 ft x 8 mm. - ရွှေကျွန်းရောင်
SCG Smartwood သစ်ပြားချပ် Wow စီးရီး 5.90 in x 9.84 ft x 8 mm. - Wow ရွှေကျွန်းသစ်
SCG Smartwood ဘီတင်ပြား - Classic စီးရီး 3.94 in x 9.84 ft x 12mm - မူလသစ်ခံရောင်
နအိမ်အခန်းကန့်ခြင်းများနှင့်အလှဆင်ခြင်း များမှာ အများနဲ့မတူညီစေ ပဲတမူထူးခြားစွာ ပြုလုပ်ချင်သူတွေအတွက်
"အိမ်တစ်အိမ်၏ အဓိက အချက်အခြာကျ ဧည့်ခန်းအားဖုန်းရွှေနည်းအရနေရာချထားခြင်းဖြင့် အိမ်သူအိမ်သားများသာမက အိမ်အတွက်လည်း ကံကောင်းခြင်းများကိုရရှိစေပါတယ်။ ယခုလိုအိမ်အား မင်္ဂလာရှိရန် ဖုန်းရွှေနည်းအရနေရာရွေးခြင်း၊ အိမ်သူအိမ်သားများနှင့် အပ်ဆက်သောအိမ်အရောင်ရွေးချယ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရပါမည်။”
ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်။ ။အေးမြသောလေတိုက်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ရန် မတူညီသောထောင့်များ နေရာများအား အနားယူရာနေရာများအဖြစ်ပြောင်းလဲမည့်စိတ်ကူးများ